भारतलाई चीनसंग तनाब बढिरहेका बेला देशभित्रै अर्को झट्का, अब के गर्लान मोदी ? — SuchanaKendra.Com
भारतलाई चीनसंग तनाब बढिरहेका बेला देशभित्रै अर्को झट्का, अब के गर्लान मोदी ?
नयाँदिल्ली । भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या दुई हजारभन्दा बढी थपिएको छ । भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै २ हजार ३ जना मृतक थपिएका छन् । तर ती सबै पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै मृत्यु भएका भने होइनन् । महाराष्ट्र र दिल्लीले मृतकको संख्या छुटेको भन्दै सच्याएपछि भारतमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेको हो ।
योसँगै भारतमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ११ हजार ९ सय ३ पुगेको छ । त्यस्तै भारतमा मंगलबार थप १० हजार ९ सय ७४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३ लाख ५४ हजार ६५ पुगेको छ । त्यसमध्ये एक लाख ८४ हजार ९ सय ३४ जना निको भएका छन् । एक लाख ५५ हजार २ सय २७ जना भने उपचारका क्रममा रहेका छन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आगामी रणनीति तय गर्न मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न २१ वटा राज्यका मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका थिए । कोरोना संक्रमणका हिसाबले भारत अमेरिका, ब्राजिल र रुसपछि चौथो स्थानमा रहेको छ । उता बेलायती विज्ञहरुले कोरोना भाइरस संक्रमितहरुलाई लो डोजको स्टेरोइड ट्रिटमेन्टले धेरै फाइदा पुग्ने दाबी गरेका छन् । ‘डेक्जामेथासोन’ नामक औषधिले कोरोना भाइरसका सिकिस्त बिरामीहरुलाई बचाउने विश्वास लिइएको छ ।
भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीमा हुने मृत्युको जोखिमलाई ४० प्रतिशतबाट २८ प्रतिशतमा ल्याउन सक्ने तथा अक्सिजन चाहिने बिरामीको मृत्युको जोखिमलाई २५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झार्न सक्ने वैज्ञानिकको दाबी छ । प्रमुख अनुसन्धानकर्ता प्रा. पिटर हर्बीका अनुसार हालसम्म यही मात्र औषधिले तुलनात्मक रुपमा मृत्यु दर घटाउन सफल रहेको दाबी गरेका छन् । ‘यसले उल्लेख्य रुपमा मृत्युदर घटाउँछ । यो मेजर ब्रेकथ्रु हो,’ उनले भने । मुख्य अध्ययनकर्ता प्रा. मार्टिन लान्ड्रेले यो अध्ययनले भेन्टिलेटरमा उपचाररत ८ जना बिरामीमध्ये एकको ज्यान बचाउन सक्ने दाबी गरे । साथै अक्सिजन सपोर्टमा रहेका २० देखि २५ जनामा एकजनालाई बचाउन सकिन्छ ।
प्रा. लान्ड्रे भन्छन्, ‘यसबाट स्पष्ट फाइदा मिल्छ । यो औषधिको उपचार करिब १० दिनसम्म गरिन्छ । यसको मूल्य ५ पाउन्ड रहेको छ । ३५ पाउन्ड जति खर्च भएमा जीवन बच्छ । यो विश्वभर पाइन्छ ।’ उनका अनुसार अस्पतालमा उपचाररत बिरामीलाई ढिला नगरिकन यो औषधि दिन थालिहाल्नुपर्छ । ‘स्वासप्रस्वासमा कुनै पनि समस्या नदेखिएका बिरामीले यसको सेवन गर्नु हुँदैन । साथै कसैले पनि घरमै बसेर यसको प्रयोग पनि गर्नु हुँदैन ।’ कोरोना भाइरसको विरुद्ध हाइड्रोक्लोरोक्विन पनि प्रयोग गरिएको थियो । तर, त्यसले विभिन्न असर तथा मुटुमा समस्या ल्याउने देखिएपछि प्रयोगमा आएको छैन ।
त्यसैगरी एन्टिभाइरल ट्रिटमेन्टका लागि रेमडिसिभर पनि प्रयोगमा आएको छ । यो चाहिँ कोभिडका बिरामीहरुलाई केही हदसम्म फाइदाजनक नै मानिएको छ । यो औषधि इबोलाको उपचारको लागि पनि प्रयोग भएको थियो । यसले कति दिनमा ठिक गर्छ र मृत्युदर कति घटाउँछ भन्ने स्पष्ट भएको छैन । साथै यसको थोरै उपलब्धता हुनु र मुल्य पनि तोकिएको छैन । डेक्जामेथासोन पहिलो पटक १९६० को दशकदेखि आर्थराइटिस र आस्थमाका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ ।